Munguva yepashure-denda, tarisa pane mutsva maitiro emota mateki
Kutanga kwe COVID-19 muna 2020 kwakamanikidza guta kuti rimanikidze bhatani rekumbomira. Mushure mehupenyu hwakareba hwemhuri uye nhau dzisingaverengeke nezvekurwisa denda, munhu wese ane kufunga kutsva uye kunzwisisa kwehupenyu nehupenyu. Kune zvakare zvakare kutarisisa kune hutano.
Iyo mota ndiyo yevatengi "imba yechipiri", uye hutano hwezvinhu zvemataisi emota ndiyo inosarudza hupenyu hwevanhu.
Mushure mekuputika kweCOVID-19, ingave iri dambudziko remota rinonhuwa kwenguva refu kana dambudziko rekuchenesa mweya, antibacterial uye anti-hutachiona hwave zvakare tarisiro yevatengi. Aya anozove mafambiro matsva e "mateki ane mota uye akasununguka."
Kunyangwe hosha yakadzikama, yakave nekukanganisa kwakanyanya pahupenyu hwedu: kune rumwe rutivi, ruzivo rwekushandisa kwevatengi rwakakura zvishoma nezvishoma. Denda risati rasvika, munhu wese aiteerera zvishoma kune zvakawanda zvinhu. Vazhinji vavo vakangoteerera kune "inoonekwa" mhando uye dhizaini. Vatengi mu "post-denda nguva" yakakanganiswa nedenda vakatanga kuve nezvinodiwa zvakanyanya zve "zvisingaonekwe zvinhu" sekuchengetedza uye mhando. Kune rimwe divi, pfungwa yekufamba zvine hutano yakadzika midzi mumoyo yevanhu. Pamusoro pekubvisa chifukidzo, kutyaira yakazvimirira mota yave tsika yekufamba ine hutano kune vanhu vazhinji.
Zvinoenderana neongororo yakaitwa naCox Automotive, chetatu chevaridzi vemota vanozofunga nezve "mhando yemweya" yemotokari kana vachitenga mota mune ramangwana. Tichifunga nezvekukwira kuri kudiwa kwemusika mune ramangwana, takaona kuti vatengi vachiwedzera uye vanofarira mishonga inorwisa mabhakitiriya yemota. Iko kushandiswa kweasina-chepfu, zvakatipoteredza zvine hushamwari uye antibacterial zvinhu zvemameti emota ndiyo yakajairwa tsika yekuona hutano uye kuchengetedzeka kwemotokari munguva yepashure pehosha.
Pakutanga kwesheni yekumisikidzwa, DEAO yaitenda kuti kuchengetedzwa kwezvakatipoteredza ndicho chinhu chekutanga chekuziva kukosha kwemata emota mushure memusika. Kunyanya munguva yakakosha yenguva yepashure-denda, yakasimudza kutsvaga kwegirini, kuchengetedzwa kwezvakatipoteredza, hutano uye kuchengetedzeka kune imwe nhanho isati yamboitika.
Nemoyo wezvakatipoteredza, isu takazvipira kune hutano hwemateki emota.
Chinyakare mota pasi matawi anoshandisa kemikari chipanji zvinhu. Sponge chigadzirwa chemakemikari chakapupuma furo kubva kuTDI benzene, cyanide, inopupa furo uye mamwe makemikari.
TDI ikemikari ine chepfu yakanyanya isingagadzirise nharaunda panguva yekugadzirwa. Pamusoro pezvo, inoburitsa zvinhu zvine chepfu uye zvinogumbura panguva yekushandiswa kwayo, izvo zvinokuvadza nzira yekufema kwevanhu uye inoperekedzwa nenjodzi yekenza. Icho chigadzirwa chakarambidzwa panguva yeOlympics.
Yakabatana neyakaiswa huchi hwesiponji, sangano rakamanikana uye harina mweya. Kana mvura yangopinda mukati mechipanji chemotokari, hazvisi nyore kuoma, uye zviri nyore kubata tsvina uye kuita nzvimbo yekuberekera mabhakitiriya.
Deao TPE ine zvakatipoteredza mota inovhuvhuta mateki inopaza kuburikidza neyechinyakare zvigadzirwa, Iyo inotora nyowani kuchengetedza kwezvakatipoteredza TPE zvigadzirwa zvinonyanya kuzivikanwa neakakwira-magumo emagetsi vagadziri, akachengeteka uye asiri-chepfu, haina zvinhu zvinokuvadza senge formaldehyde uye toluene, ine yakagadzikana kuita, uye zvinobudirira inogadzirisa dambudziko rekudzivirira mvura uye hunyoro-chiratidzo.
Kubva pamateeti anoshanda emota kusvika kumatsipa emota akasimba kusvika kumateki emota ane hutano, iyi ndiyo tsika isingadzivisike mukuvandudzwa kwemapedhi etsoka, uye zvakare iri pfungwa yechiratidzo yakakoshesa.